आफ्नो रूसी युरोपेली Laika। भन्दा यो खुवाउन राम्रो छ?
नस्ल बारेमा केहि शब्द
को शिकार जातिहरु बीच यी कुकुर सबैभन्दा बहुमुखी हुन मानिन्छ। तिनीहरूले जनावर र चरा लागि जान सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले उत्कृष्ट प्रवृत्ति, साहसी बलियो र हार्डी छ। को शिकारी लागि रूसी युरोपेली Laika एक अपरिहार्य उपकरण हो। रक को आधुनिक प्रकार चयन र कुकुर ह्यान्डलरहरूको प्रजनन काम वर्ष मार्फत गठन। यसलाई आधार Zyryanskaya वा कोमी huskies सेवा छ। हाल, केन्द्र प्रजनन यी कुकुर ठीकै Yaroslavl, हुनत नस्ल रूस धेरै अन्य क्षेत्रहरु मा साधारण छ मानिन्छ।
एक कर्कश खुवाउन के
आफ्नो पुर्खाहरूको देखि रूसी युरोपेली Laika दुर्लभ सादगी र धीरज जन्मजात। यो कठोर पर्यावरण अवस्थामा एक कठोर चयन द्वारा facilitated थियो। सबै जस्तै जंगली जनावर, यी कुकुर मा पेट एक एकाग्रचित्त र वर्दी फिड गर्न सबै भन्दा राम्रो अनुकूल छ। त्यसैले, तिनीहरूलाई लागि आदर्श खाना कच्चा मासु छ। यो प्रति प्रति दिन शरीरको वजन को किलोग्राम 5-25 ग्राम को Laika दर दिन आवश्यक छ। मासु बोल्ड हुनु हुँदैन। यो मासु छ भने राम्रो छ। मासु दिने, तपाईँले यसलाई स्वास्थ्य निरीक्षण पार गरेको छ र कुनै helminth अन्डा समावेश छ भनेर निश्चित हुनुपर्छ।
मासु संग समुद्री माछा कुकुर गर्न सकिन्छ। किनभने उनीहरू क्याल्सियम समावेश, हड्डी निर्माण गर्न आवश्यक आहार, कच्चा हड्डी समावेश गर्नुपर्छ निश्चित हुनुहोस्। एक दिन2पटक खुवाउन एउटा वयस्क कुकुर। अंश जनावर को वजन मा गणना, साना हुनुपर्छ। खाना पनि थप्न सिफारिस गरिएको छ मासु र हड्डी भोजन, द्वारा-उत्पादनहरु विभिन्न। खुवाउने भने आफ्नो रूसी युरोपेली Laika fatness, हँसिलो र मोबाइल, पर्याप्त हुनुपर्छ। यस गहन काम समयमा कुकुर3पटक एक दिन खुवाउन सिफारिस गरिएको छ।
मामला मा, तपाईंले आफ्नो कुकुर मात्र मासु र माछा खुवाउन सक्छन् भने, यो दलिया, porridge अनाज र बनेको रूपमा दिइएको छ मकैको पिठो, बिस्कुट, रोटी। भर्न भिटामिन लागि आवश्यकता मुख्य फिड थप्ने, खाना shredded कच्चा तरकारी मा शामिल गर्न सकिन्छ। काशी मासु शोरबा खाना पकाउने लागि मनमोहक। प्रोटिन कमी भर्न समय समयमा खाना घरेलु पनिर र कच्चा अन्डा थपियो सिफारिस गर्छौँ।
कर्कश खुवाउन के निर्णय गर्दा, यो कुकुर को कलेजो विभिन्न हानिकारक पदार्थ को प्रभाव बढी संवेदनशील छन् भनेर सम्झनु पर्छ। त्यसैले आफ्नो पाल्तु जनावर मासु, sausages, मिठाई र अन्य व्यञ्जनहरु दिन छैन। तिनीहरूले कुकुर कुनै लाभ छन्। कुकुर खाना नुन थप हुने छ। भिटामिन पूरक र माछा तेल राम्रो वृद्धि र विकासको लागि नियुक्त छन्। ड्राई पाल्तु जनावर रूसी युरोपेली Laika मात्र इनाम रूपमा प्राप्त वा व्यवहार गर्नुपर्छ। तिनीहरूले adversely यसको कलेजो र अन्तस्करणले को सञ्चालन असर गर्छ। कुकुर प्राकृतिक आहार मा राम्रो लाग्छ।
4 प्रति दिन गर्न feedings संख्या वृद्धि गर्भवती र lactating Bitches खुवाउनुभयो थप liberally र अक्सर, कच्चा मासु र गाई गरेको दूध दिन्छ। दही, सूप,: सजिलै digestible खाना दिइएको3दिन को लागि whelping पछि डेयरी अनाज।
खुवाउने puppies huskies russkoevropeyskoy
रूसी युरोपेली Laika puppies को महिनाको सम्म आफ्नो आमाको दूध खुवाइन्छ। त्यो पर्याप्त दूध छ भने, तिनीहरूले खुवाइन्छ। पूरक आहार सामान्यतया 3-4 सप्ताह को उमेर देखि, बिस्तारै शुरू छन्। यो गाई गरेको दूध, कच्चा अन्डा, कीमा बनाएको मासु प्रयोग गर्न सम्भव छ रूपमा। दूध कुकुर गाई गरेको भन्दा बढी प्रोटिन समावेश गर्छ, त्यसैले यसलाई को कमी अन्डा र मासु क्षतिपूर्ति दिइएको छ। पछि लैक्टिक लालच porridge जई वा सूजी मा प्रशासित।2महिना मा puppies वयस्क कुकुर जस्तै खाना खान सक्छन्। मात्र भद्दा, उदाहरणका लागि चढाएको अशुद्धताओं, wholemeal दलिया बहिष्कृत गर्नुपर्छ।4महिना दूध डेयरी उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न सल्लाह गर्दै पछि एक वर्ष feedings संख्या4वा5बराबर हुनेछ।
उचित रुचाउने कुकुर चेतावनी र काम गर्न तयार हुन मदत गर्नेछ। हेरविचार संग व्यवहार, र परिणाम तपाईं निराश छैन!
बिल्ली मा दौरा शामिल: कारणहरू, मालिश, लागूपदार्थ। उमेर बिरालोहरु
नीलो कुकुर - रंग शाही कुकुर
"ओपल vectra बी" मिलाउने: कार को दोस्रो जीवन
घरमा बनाउँने: व्यञ्जनहरु
राउन्ड अनुहार लागि छोटो Hairstyles
बाह्य वाणिज्य को प्रभावकारी व्यवस्थापन
अरब पठार। जहाँ एक सामान्य विवरण छ।
खुला दोकान जोखिम बिना
मा रूसी को क्षमा गर्नुहोस के हो